नेपाल- कृषि प्रधान कि, उपभोक्ता प्रधान देश? « Media for all across the globe
जनप्रतिनिधिहरु कृषिलाई मजाक बनाइरहेका छन्। हरेक वर्ष असार १५ का दिन खेतमा पुग्याे, हिलाे खेल्याे, सेल्फि खिच्यो। राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कृषकका सन्तानसम्म वर्षमा एकपटक मात्रै खेतमा रमाइलोका लागि पुग्ने प्रचलन सुरु भएको छ।
हाम्रो परम्परागत कृषि शैलीमा सुधार ल्याउने तर्फ सरकारकाे पटक्कै ध्यान छैन। कृषिकलाई मारमा पार्ने र नेपाली उत्पादनलाई उपेक्षा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट कसरी किसानहरुले उन्मुक्ति पाउलान्?
कृषि प्रधान देशका खेतवारिमा उत्पादन छैन। युवाहरू खाडी, भारतक गल्ली-गल्लीमा भाैतारिरहेकाे कस्ले र कहिलेसम्म देख्ने? देशमा आवश्यकता अनुसारको गुणस्तरीय मल छैन। आधुनिक कृषिको झन् अत्तोपत्तो छैन। राज्यबाट आएको बजेट उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यक्रता पाल्न ठिक्क छ। बजेट को ८० प्रतिशत ठुलाबडाकाे गाेजीमा पसिहाल्छ – वर्षको एकदिन खेतमा हुने रमिते गाइजात्रालाई फेरि पनि कृषि महान।
वास्तविक किसानहरु हिजाे जहाँ थिए त्यही छन्। नक्कली किसानहरु पार्टी निकटका संगठन खाेजेर राज्यकाे सम्पत्तिमा रामरमिता चलाइरहेका छन्। देशमा अात्मनिर्भताभन्दा परनिर्भरता बढ्दाे छ। कृष गर्ने जमातभन्दा उपभाेग गर्ने संख्या धेरै छ। तै पनि वास्तविक कृषकहरुमा शुभकामना छ।